समिक्षा : कैटरीना र सिद्धार्थका फ्यानले हेर्नुस् ‘बार-बार देखो’ | Cinekhabar.com
Home reviews समिक्षा : कैटरीना र सिद्धार्थका फ्यानले हेर्नुस् ‘बार-बार देखो’
डायरेक्टर नित्या मेहराको फिल्म बार बार देखो हाल रिलिज भएको छ । फिल्ममा अभिनेत्री कैटरीना कैफ र एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्राको साथमा राम कपूर, सारिका, सयाली गुप्ता मुख्य भूमिकामा देखिएका छन् । यो एक रोमान्टिक ड्रामा मुभी हो । बार बार देखोको कहानी बच्चाको साथी जय वर्मा उर्फ सिद्धार्थ मल्होत्रा र दीया उर्फ कैटरीना कैफको हो ।
जय मेथ्सको प्रोफेसर हुन् भने दीया आर्टिस्ट। दीया जयसँग विवाहका लागि प्रपोज गर्छिन । त्यही बेला जयको विदेशबाट जागिरको लागि अफर आउँछ । त्यसपछि सिद्धार्थ विदेश जान चाहन्छन् तर दीयाका पिता राम कपूरले जयलाई विदेश जान अनुमती दिँदैनन् । घरमा बिहेको माहोल चलिरहेको हुन्छ र यसै कुरालाई लिएर जय र दीया बिच झगडा पर्छ ।
जब जय विहान निन्द्राबाट उठ्छन् त उनको जिन्दगी १० दिन अगाडी बढेको हुन्छ र जय वाइफको साथ हनीमूनका लागि थाईल्याण्डमा हुन्छन् ।
एक दिनमा १०, दुई दिनमा २ बर्ष र तीन दिनमा १६ बर्ष जयको जिन्दगी अगाडी बढेको हुन्छ । त्यसपछि दीया जयलाई कोर्टमा मिल्न बोलाउँछिन् । त्यहाँ पुगेपछि थाहा हुन्छ कि दीया जयसँग डिभोर्स चाहेकी हुन्छिन् । के जयले दीयालाई फेरी आफ्नो जिन्दगीमा फर्काउन सक्छन् ? बाँकी अगाडीको कहानी थ्रिएटरमा गएपछि मात्र थाहा हुन्छ ।
‘बार बार देखो’मा म्यूजिक परफेक्ट छ । अमाल मलिक, आर्को, बादशाह, जसलीन रोयल र बिलाल सईदले यो फिल्ममा म्यूजिक दिएका हुन् । निर्देशक नित्या मेहराले दिल्ली, थाईल्याण्ड र लण्डन तीन स्थानलाई पर्दामा उत्कृष्ट तरिकाले प्रस्तुत गरेका छन् । यसको सिनेमेटोग्राफी पनि तारिफ योग्य छ । फिल्मको कमजोरी यसको कहानी हो, आज, भोली र पर्सीको कन्सेप्ट राम्रो छ तर स्क्रिनप्ले निकै कमजोर छ । फिल्म इन्टरवलपछि चाँही राम्रो लाग्न थाल्छ ।
३६ बर्षमा लागे जीवन लुइँटेल, किन चल्न छोडे उनका फिल्म ?
नेपाली यूवाहरुको नृत्य किन हेर्न सकेनन् प्रभु देवाले ?